Tsvaga iyo nzira yemaLoire castle muFrance | Bezzia
Nzira yemizinda yeLoire muFrance
Susana Garcia | 28/04/2021 10:00 | Lifestyle, famba
Kana iwe uchitova kufunga nezverwendo rwako rwunotevera, haugone kupotsa zvimwe zvezvirongwa zvedu. Kune nzvimbo dzinogara dzichitisiya tichishamisika, sezvo dzinoita sedzakatorwa kubva munyaya. Iyo nzira yedzimba dzeRoire Valley muFrance Iyo ndeimwe yemasaiti iyo isingasiye chero munhu asina hanya. Ndiyo imwe yenzira dzerudo uye dzinoshamisa dzinogona kuitwa muFrance uchiziva nzvimbo izere nenhare dzerunako runoshamisa.
When isu tinotaura nezve nhare dzeLoire Tiri kutaura pamusoro pezvivakwa izvi zvinowanikwa munzvimbo yepazasi yepakati yenzira yeRwizi rweLoire pakati peFrance. Dzakawanda dzedzimba idzi dzakatangira muMiddle Ages, dzakavakwa senhare dzechokwadi, kunyangwe gare gare chateaux dzakagadzirwawo, dzinoitirwa senzvimbo dzekugara dzemachinda. Nhasi dzimba idzi dziri chikamu cheWorld Heritage Site.
1 Gadzirira kushanya kwako
2 Nhare yeSully-sur-Loire
3 Chenonceau Castle
4 Chambord castle
5 Villandry Castle
6 Chaumont Castle
Gadzirira kushanya kwako
Munharaunda yeLoire Valley tinogona kuwana dzimba dzinopfuura makumi mashanu, izvo zvinoita kuti zviome kuvaona vese. Ndokusaka izvo zvinowanzoitwa runyorwa pamwe nenhare dzekufarira zvakanyanya, kugadzira nzira yekuzvivhara. Iyo mizhinji inowanikwa pakati pemaguta eAngers neOrleans, saka nzira yacho inowanzo gadzirwa kubva kune imwe ichienda kune imwe. Iyo nguva dzakanakisa dziri mukati megore nekudonha, kana mamiriro ekunze akanaka, nekuti haugone kushanyira dzimbahwe chete, asiwo zvakapoteredzwa nemasango, mapindu kana minda yemizambiringa.
Iyi XNUMXth century castle ndeimwe yeanonyanyo shandiswa senhare inodzivirira muhondo. Yakakomberedzwa nemoat uye iwe unogona kufamba munzira yayo kana kupinda mukati kuti uone guva reEarl of Sully kana yekare yekare yezana ramakore rechiXNUMX.
Iyi ndiyo imwe yedzimba dzakanaka kwazvo muLoire uye zvakare imwe yeakanyanya kufarirwa. Zviri XNUMXth century century castle inozivikanwa se 'imba yemadzimai' nekuda kweshanduko dzakaitwa nevakadzi vakasiyana nekufamba kwenguva. Iine imwe yemukati inonakidza uye ine runako rukuru rwekunze nezwi rayo jena, turrets uye mapindu. Uye zvakare, yakakosha muunganidzwa wekupenda nevanyori vakaita saRubens kana Murillo vakatimirira mukati.
Iyi ndiyo imwe imba inonyanyozivikanwa kwaunofanirwa kuwana yekupinda pamberi kuti usazosara usina iyo. Mambo Francis I vakashandisa iyo masango akanaka akapoterera kunovhima uye nderimwe remakuru muRwizi rweLoire rine dzimba dzinopfuura mazana mana. Inotipa muenzaniso wakanaka weFrance Renaissance uye ine masitepisi mahombe mukati ayo vanoti akagadzirwa naLeonardo da Vinci.
Iwo akanaka kwazvo mapindu enhare dze Loire anoita kunge anowanikwa muCastle yeVillandry. Iyi nhare yakavakwa panguva yeRenaissance uye ine hombe kwazvo uye inoshamisa zvechokwadi mapindu ayo ari mamwe emamwe akanakisa muFrance. Ivo vane akasiyana magadzirirwo uye madingindira pamatanho matatu emateru.
Izvi zvinowanikwa mune zvimwe zvakakosha izvo zvatisingatombofaniri kudarika. Nhare iyi yaive yaCatherine de Medici uye yaive yakavakwa muzana ramakore rechi XNUMX nerechi XNUMX. Iyo inhare hombe ine echirungu-dhizaini mapindu uye mabasa ehunyanzvi. Iyo inodzoserwa nhare ine mucherechedzo shongwe dzinoyeuchidza nezveavo vakajairika fairytale castle. Uye zvakare, kubva padhorobha rayo unogona kuona inoshamisa panoramic yeRoire Valley.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Lifestyle » Nzira yemizinda yeLoire muFrance
Hanyanisi hwema, ndingaibvisa sei zvinobudirira?
Zvekuita kana mumwe wako asingakukoshese